ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကိုကင်းနှင့် ဘိန်းထုတ်လုပ်မှု စံချိန်တင်မြင့်တက်ဟု ကုလသမဂ္ဂ ဆို - Yangon Media Group
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကိုကင်းနှင့် ဘိန်းထုတ်လုပ်မှု စံချိန်တင်မြင့်တက်ဟု ကုလသမဂ္ဂ ဆို
ကုလသမဂ္ဂ၊ ဇွန် ၂၈
၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာပေါ် ရှိ ကိုကင်းနှင့်ဘိန်းထုတ်လုပ် မှုမှာစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း အမှောင်ကွန်ရက်ကိုအသုံးပြုကာ မှောင်ခိုရောင်းဝယ်မှုလည်းတိုး ပွားလာခဲ့ကြောင်း၊ အင်တာနက် လျှို့ဝှက်ချက်အားနည်းမှုကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ၏အစီရင် ခံစာတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
နယူးယောက်မြို့ ကုလသမဂ္ဂ ဌာနချုပ်၌ပြောကြားရာတွင် ကုလသမဂ္ဂမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ရာဇဝတ်မှုရုံး (UNODC)မှ ယူရီဖီဒိုတို့ဗ်က ကမ္ဘာ့မူးယစ်ဆေးဝါးဈေးကွက်မှာကျယ်ပြန့်လာနေကြောင်း၊ ကိုကင်းနှင့်ဘိန်းထုတ်လုပ်မှုမှာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံး၌ အလွန်မြင့်မားလာ ကြောင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ရလောက် အောင်ထိ တိုးမြင့်လာခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အွန်လိုင်းအမှောင်ကွန်ရက် အသုံးပြုကာ မူးယစ်ဆေးရောင်း ဝယ်မှုမှာလည်း အလျင်အမြန်ကြီးထွားလာနေကြောင်း၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ပျော်ရွှင်မှုနှင့်မူးယစ်ဆေး ဝါးပေါင်းစပ်မှုမှာလည်း ခန့်မှန်းမရ အောင် ဖြစ်ပျက်လျက်ရှိကြောင်း ၎င်းကပြောခဲ့သည်။ စိတ်ြ<ွကဆေး အသစ်များကလည်း ဆက်လက် ပြန့်ပွားလျက်ရှိနေကြောင်း မီသိုင်းဖီတာမင်ဆေးပြားများမှလည်း ၎င်း၏ပုံမှန်ဈေးကွက်ပြင်ပသို့ ရောက်ရှိလျက်ရှိကြောင်း ဖီဒိုတို့ဗ်ကပြောကြားခဲ့သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့် သေဆုံးမှုများတွင် ဆေးလွန်၍သေဆုံး ရခြင်းမှာ ၇၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိနေ ကြောင်း၊ ၂ဝ၁၆ နှင့် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် ဘိန်းထုတ်လုပ်မှု ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာကာ တန်ချိန် ၁ဝ၅ဝဝဝ ရှိခဲ့ကြောင်း၊ UNODC ၏ စောင့် ကြည့်မှုစသည်မှကမ္ဘာ့ဘိန်းထုတ် လုပ်ရေးမှာ စံချိန်အမြင့်ဆုံးသို့ ရောက်ခဲ့ကြောင်း၊ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
မန္တလေး တိုင်းအတွင်း ဒုတိယ တစ်နှစ်တာကာလ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ စိတ်တိုင်းကျ ကျေနပ်မှု မရှိ??
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ ဖာပွန်မြို့မှ ရေဘေးသင့် အိမ်ခြေ ၁ဝဝဝ အ??
တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရဝန်ကြီးက အောင်လံမြို့နယ် စကြီးကျေးရွာအတွင်း လျှပ်စစ်မီး ဖြတ်သန်း သွယ??